Allegri oo u sheegay Arsenal xiddiga uu doonayo in uu noqdo saxiixiisa kowaad…Waa kee? – Gool FM
Allegri oo u sheegay Arsenal xiddiga uu doonayo in uu noqdo saxiixiisa kowaad…Waa kee?
Kaafi March 5, 2017
(London) 05 Mar 2017. Massimiliano Allegri waxa uu Arsenal u sheegay bartilmaameedkiisa ugu weyn isaga oo ku tilmaamay khadka dhexe ee Lazio Sergej Milinkovic- sidaas waxaa laga soo xiganayaa warar hoose.
Sunday Express waxa ay sheegtay in Allegri uu heshiis afka ah la gaaray Arsenal si uu u badalo Arsene Wenger marka uu dhamaado oolahan, ninka reer France ma muujin in uu saxiixi doono qandaraas sanad ama laba ah oo la sheegay in kooxdu u soo bandhigtay.
Yeelkeede, saxaafadda waxa ay sheegeysaa in Talyaaniga uu hore wadaxaajood ugula jiray Arsenal waxa uuna u sheegay bartilmaameedyadiisa.
Waxaa ka mida Milinkovic-Savic, kaas oo bandhigyo caaqibo leh xilli ciyaareedkan u sameeyey Lazio.
Xiddiga kolba labada xeyn-daab ganaax taagan ayaa dhaliyey afar gool halka uu saddex kalena caawiyey 24 kulan oo uu Serie A-ga uga soo muuqday Lazio xilli ciyaareedkan.
Kooxda reer Italia waxa ay rabtaa in ay heshiis cusub ka saxiixato balse Serbian-ka wadahadal ma gali doono ilaa iyo ololaha idlaado.
Maxaa lagu micneeyey dabaal dagii Messi ee ahaa sida in uu Telefoon wacayo?
Zlatan Ibrahimovic oo ganaax wajahaya....(Miyuu seegayaa kulanka Chelsea???)